Kufambidzana maapplication ari kuramba achikura muSpain | Bezzia
General dating app downloads yakakura 32% mukutanga kwegore rino 2022. Kusarura pamusoro pemapeji aya kwadzikira uye vanhu vakawanda vanoona maapplication aya seimwe nzira yekusangana nemumwe munhu.
Mazhinji emapeji aya anoshanda pasi accelerated dynamics umo zvakakwana kutsveta chigunwe chako pahwindo kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kuti usarudze imwe nguva inotevera. Vamwe vane rhythm yakasununguka, sarudza maprofile akasimbiswa uye timu yevanhu inopindura kuseri kwechidzitiro.
Unoziva here kuti isu maSpaniard tisu chechitatu pachinzvimbo kushandiswa kwepamhepo kufambidzana portals uye maapplication? Isu tinongopfuura neUnited States neBrazil padanho, izvo zvinotiisa kumusoro kweEurope mukushandiswa kwemaapplication ekufambidzana. Asi, izvi zvikumbiro zvakaita sei uye ndezvipi zvinonyanya kufarirwa muSpain?
1 Kune ese
2 Iyo inonyanya kufarirwa muSpain
El Kukwira Kwevanhu Vamwechete, iyo, maererano nedata kubva kuNational Institute of Statistics, yakabva pa36% muna 2019 kuenda pa40% muna 2021, uye iri kushandiswa nemusika wekunyorera mukutsvaga nguva dzose yegeneral niches kwainogonesa masevhisi ayo.
Uye kwete chete kubva kugeneral niches, aya maapplication anoshandisawo mamwe marudzi e niches maererano nezvido, marudzi uye kunyange zvitendero. Nhasi kune kufambidzana zvikumbiro zvemunhu wese, kunyangwe kana tichisiya inonyanya kufarirwa tinogona kuwana kushomeka kwevashandisi.
Sezvatatotaura, mazhinji eaya maapplication anoshanda ari pasi pekukasira dynamics mairi zvakakwana tsvaira chigunwe chako pahwindo kusarudza nguva inotevera. Isu tiri kutaura, semuenzaniso, nezve maapplication akaita seTinder kana Bumble, umo ari mukadzi anofanira kutora danho rekutanga.
Kune rumwe rutivi, imwe mhando yeapss inonyepedzera kuva yakawanda yekuzorora uye ine hushamwari nzvimbo. Aya anowanzo kunangwa kune chaiwo niches, sezvazvakaita, semuenzaniso, yeOurtime, yakatarisana neavo vanopfuura makore makumi mashanu. here iyo kusarudzwa kwevanoda kukwikwidza inopihwa zvinoenderana nehukama mushure mekupindura mubvunzo wakanyanyisa uye ese maprofile anosimbiswa, kureva kuti application inoita shuwa kuti munhu anomiririrwa mudhijitari profiles anoenderana nemunhu ari munyika chaiyo.
Kune maaps umo vashandisi vanonyanya kutsvaga kusangana kwakajairika kana kusangana pabonde uye kumwe uko hukama hunoiswa pamberi. Yakakurumbira, zvisinei, pindura kune ese maprofiles, nekudaro anosanganisira makuru akasiyana evashandisi.
Iyo inonyanya kufarirwa muSpain
Edarling uye Meetic Iwo achiri akanyanya kushanyirwa portals muSpain. Ose ari maviri akavakirwa pakuita machesi kupa zano vadyidzani, vachikubatsira kuwana vanhu vane hukama hwepfungwa uye vanowirirana. Ndine chokwadi chekuti uchaziva sirogani yekutanga: yekuda singles.
Yechipiri, Meetic, ndeyeMatch Group inotonga nzvimbo yekufambidzana ine maapplication akaita seTinder, Hinge, Mazhinji eHove, OK Cupid, Ourtime kana Match. Pakati peizvi sorwonzi ndiyo inonyanya kufarirwa, kuva pakati pepamusoro 3 inonyanya kufarirwa kufambidzana maapplication munyika dzakasiyana seUS, UK, Germany, France, Spain neItari.
Zvinoenderana nefungidziro dzakasiyana siyana, Match Group inodarika makumi mashanu nenhanhatu muzana ezvekurodha pasi, ichiteverwa neboka reMagicLab, rine muridzi. bumble uye badoo, imwe yeanonyanya kufarirwa kufambidzana application muSpain.
Kana iwe uchida kusangana nevanhu vane zvaunofarira zvakafanana munharaunda yako, ita shamwari kana kutsvaga hukama, izvi zvekufambidzana zvikumbiro digital imwe nzira kune dzimwe nzira dzechinyakare uye dzakatarisana dzekuita zvinhu. Verenga tsananguro yavo, saina kune vaviri vavo uye edza.
Ramba uchifunga kuti kusangana nevanhu nenzira iyi kunogona kunetsa. Zvinotora nguva kutsvaga kuti uwane a priori akafanana profiles, ayo asingangopindi kwatiri nekuona asi nezvavanotaura. Uyezve, kana vangowanikwa, havawanzova nezvinangwa zvakafanana nesu. Kana chinangwa chedu chakanyatsojeka, chinogona kuunza kushushikana kuti tipinde muchikamu chimwe chete nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Kufambidzana maapplication ari kuramba achikura muSpain
Body Mist: kuti chii, mashandisirwo ayo uye nezvimwe zvakawanda